March 13, 2018 – Burmese.asia
အနုပညာလောကကြီးတစ်ခုလုံးထိရှသွားအောင် စကားဆိုလိုက်တဲ့ လွင်မိုး
ချစ်ရည်လူးတဲ့အခန်းတွေမှာ မေကရှက်လို့ဆိုတဲ့ အလင်းရောင်
အသက် ၈၀ အရွယ်မေ ပြောပြတာ သူ့မိဘရဲ့ ဘိုးဘွားလက်ထက်ကတည်းကဆိုတော့ ဗန္ဓုလကြီးတောင် အဲ့ဒီတွင်းကရေ သောက်ခဲ့ဖူးလေမလား
ဓနုဖြူမြို့အဝင် နန်းတော်ကုန်းရပ်က သူငယ်ချင်းအောင်းမင်းစိုးရဲ့ မိခင်နေတဲ့အိမ်က ရှေးဟောင်းရေတွင်း…၂ တွင်း အိမ်နောက်ဖက်တွင်းက အမျိုးသမီးများ ရေချိုးလျှော်ဖွတ်ကြဖို့နဲ့ အိမ်ရှေ့တွင်းက အမျိုးသားများသုံးဖို့နဲ့ သောက်ရေ အတွက်ပါတဲ့… နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ မေးကြည့်တော့ အသက် ၈၀ အရွယ်အမေပြန်ဖြေတာက.. သူ့မိဘ ဘိုးဘွားလက်ထက်ကတည်းက..ဆိုတော့… ဗန္ဓုလ ကြီးတောင် အဲ့ဒိတွင်းကရေ… သောက်ခဲ့ဖူးလေမလား…. ပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းဖို့ လိုအပ်နေတာတွေ့ခဲ့ရလို့.. အချိန်ရယင်…သွားပြီးပြုပြင်ပေးဦးမယ်. Source – Myint Kyu
ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံး (၁၀) နိုင်ငံ
ဆင်းရဲမွဲတေမှုဆိုတာ ကပ်ဆိုးတစ်ခုပါပဲ။ ကမ္ဘာကြီးပေါ်ကနေ ဆင်းရဲမွဲတေမှုကို ပပျောက်အောင် လုပ်ဖို့ဆိုတာ အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ အခက်အခဲ တစ်ခုပါပဲ။ ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတောင် ဆင်းရဲမွဲတေမှုကို တိုက်ဖျက်ဖို့ အတော်ကြိုးစား ရုန်းကန်နေရပါတယ်။ နည်းပညာတွေ မြင့်မားလာခြင်း၊ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း ထွန်းကားလာခြင်းနဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်းတွေ အင်အားကောင်းလာတဲ့ အခုလို အချိန်မှာတောင် ကမ္ဘာကြီးရဲ့ တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှာ အလွန်ဆင်းရဲတဲ့ လူတွေ နေထိုင်နေပါသေးတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိတဲ့ အဆင်းရဲဆုံး (၁၀) နိုင်ငံရဲ့ အကြောင်းကို ဖော်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆင်းရဲမွဲတေမှုကို တိုင်းတာရာမှာ တစ်ဦးချင်းက တစ်နှစ် ရရှိတဲ့ ပျမ်းမျှဝင်ငွေအပေါ်မူတည် ထားပါတယ်။ ဝင်ငွေများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဖော်ပြထားပါတယ်။ နံပါတ် (၁၀) ကနေ စတင်ဖော်ပြသွားပြီး နံပါတ် […]
ကားပေါ် မေ့ကျန်ခဲ့တဲ့ သိန်း(၁၂၀)ကို ပိုင်ရှင် ဖြစ်သူရဲ့အိမ်ထိ ပြန်လာပေးတဲ့ ရိုးသားသည့် တက္ကစီသမား
တက္ကစီကားပေါ် မေ့ကျန်ခဲ့တဲ့ သိန်း(၁၂၀)ကို ပိုင်ရှင် ဖြစ်သူရဲ့အိမ်တိုင်ရာရောက် လာပို့ပေးသည့် ရိုးသား သည့် တက္ကစီသမား နာမည်က ဦးခင်ဇော် နေတာက သမိုင်း (၁)ရပ်ကွက် (၆)လမ်း မနေ့က တက္ကဆီကားပေါ်မေ့ကျန်ခဲ့သော ငွေသိန်း (၁၂၀)ကို တက္ကဆီပိုင်ရှင် ဦးခင်ဇော်မှ ရိုးသားစွာဖြင့် အိမ်တိုင်ရာရောက်လာပို့ပေးသည့်အတွက် ကာယကံ ရှင်များမှ အံ့သြဝမ်းသာပြီး အထူးကျေးဇူးတင်ရှိလို့ ရိုးသားမှု ဂုဏ်ကို တုံ့ပြန်သောအားဖြင့် ၁၀ သိန်းကျပ် ပြန်လည် ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကျေးဇူးတုံ့ပြန်သောအားဖြင့်သာ ငွေ ၁၀ သိန်း ကျေးဇူး ပြန်ဆပ်ခဲ့သော်လည်း တက္ကစီဆရာ၏ရိုးသားမှုကို မည် သည့် အရာနဲ့မှ တန်ဖိုးဖြတ်၍မရနိုင်ကြောင်းပြောကြားပါတယ်။ ရိုးသားမှုကိုလေးစားဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါတယ်…တကယ့်ကိုသူတော်ကောင်းလက်ထဲရောက်ရှိပြီး ပြန်လည်ရရှိတယ်ဆိုတာ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပါပဲ ?ဦးခင်ဇော်အပေါ်ဘုရားရှင်သာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ?? […]
ဘုရားရှင် ဆံတော် ဘာကြောင့်အရှည်ထားရတာလဲ ဒီမေးခွန်းကို စတင်မေးခဲ့သူက ဘာသာခြားတစ်ယောက်။ ကြက်သေသေပြီး ဆွံအခဲ့သူက ကျွန်တော်နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ။ သူကမေးတယ်… “”ဘုရားရှင်က ချစ်သားရဟန်းတွေကျတော့ ဦးပြည်းခေါင်းတုံးနဲ့ ။သူကိုယ်တိုင်ကျတော့ ဆံတော်အရှည်နဲ့ကျတော့ သိပ်နည်းလမ်းမကျဘူးမဟုတ်လား။ စော်ကားချင်လို့ မေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကြိုပြီးတောင်းပန်တာပါ။ သိချင်လို့ ပါ။ တကယ်လို့တပည့်ရဟန်းတွေကို ဦးပြည်းခောင်းတုံးနဲ့ဆိုရင် သူလည်း ဦးပြည်းခေါင်းတုံးဖြစ်သင့်တယ်မဟုတ်လား။ ဒါမှနည်းလမ်းကျမှာပေါ့””….တဲ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ပါလို့ရဲရဲကြီးကြွေးကြော်တဲ့ ကျွန်တော် အရှက်ရပြီ။ ကိုယ်လည်းတစ်ခါမှ ဒီလောက်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် မစဉ်းစားမိခဲ့။ မေးသူကမေး။ ဖြေရမယ့်လူတွေက ဆွံ့အ။ နောက်ဆုံးတော့ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အတွက် မရေရာပဲ ဖြီးဖြန်းမဖြေချင်တဲ့အတွက် ရှက်ရှက်နဲ့ပဲ မသိဘူးလို့ဝန်ခံလိုက်ရပါတယ်။ သူပြန်သွားတော့ စ်ိတ်တိုတိုနဲ့ […]
လူမှုကယ်ဆယ်စောင့်ရှောက်ရေးသမား တစ်ဦးဖြစ်သူ အန်ဂျာလိုဗန်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်တုန်းက နိုင်ဂျီးရီးယားအရှေ့တောင်ဘက်ပိုင်းမှာ လမ်းလျှောက်လာတုန်း သူမတစ်သက်တာ မမေ့နိုင်မှာမဟုတ်တဲ့ မြင်ကွင်းတစ်ခုကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ သူမတွေ့ရတာက သေခါနီးအခြေအနေနဲ့ အလွန်တရာကြုံလှီပြီး ပိန်ကပ်နေတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ကိုပါ။ ကလေးဟာ လေးဘက်တွား အရွယ်လေးဖြစ်ပြီး လမ်းပေါ်မှာ ထိုင်နေတာပါ။ ထိုကလေးကို မိဘတွေက စုန်းလို့သတ်မှတ်ထားပြီး လမ်းပေါ်မှာ စွန့်ပစ်ခံခဲ့ရတာ(၈) လလောက်တောင် ရှိပြီလို့သိရပါတယ်။ လိုဗန်က Daily Mail ကို အခုလိုပြောပြပါတယ်။ “ကျွန်မ ဒီ(၂)နှစ်အရွယ် ကောင်လေးကိုမြင်လိုက်ရတော့ စိတ်ထဲတော်တော်ကို နာကျင်သွားမိတယ်။ ကျွန်မတို့ရွာထဲကို, စပြီးဝင်ဝင်ချင်း လမ်းတစ်ဖက်မှာ ဟုတ်ပ်ကို လှမ်းမြင်လိုက်ရတာပဲ။ ကျွန်မက ကလေးကို အကောင်ကြီးမယ်ထင်တာ။ သူက ကလေးလေးအရွယ်လောက်ပဲရှိတယ်။ ဟုတ်ပ်ကို မြင်မြင်းချင်း ကျွန်မသားအရင်းလိုပဲ တွေးမိခဲ့ပါတယ်။” […]
ကင်ညာနိုင်ငံမှ နာမည်ကြီး ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ဦး Nairobi က ထူးထူးခြားခြားလေးဖြစ်အောင် အိမ်ခြေယာမဲ့ စုံတွဲတစ်တွဲကို ဖိုတိုမော်ဒယ်လ်အဖြစ် အသုံးပြု ရိုက်ကူးထားတာကို တွေ့ရမှာပါ။ အချစ်စစ်ဆိုတာ ဂုဏ်ပကာသနတွေ မပါဘဲ ဖြူစင်တဲ့ချစ်ခြင်းသာလျှင် အချစ်စစ် ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ဖော်ကြူးတဲ့အနေနဲ့ ဒီလိုရိုက်ကူးရခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ Nairobi ကဆိုပါတယ်။ Sammy ခေါ် Blackie အမည်ရ အိမ်ခြေယာမဲ့အမျိုးသား တစ်ဦးက သူနဲ့ဘဝတူ မိန်းကလေး တစ်ယောက်နဲ့ အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်ခဲ့ပြီးမှ ချစ်သူတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြတာပါ။ Sammy က “ ချစ်သူတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး လိုအပ်ချက်တွေကို နားလည်ပေးမယ်၊ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ကူညီဖေးမကြမယ်၊ ဂုဏ်ပကာသနတွေကို ဘေးဖယ်ထားပြီး သစ္စာရှိရှိချစ်သွားမယ်ဆိုရင် အချစ်စစ်ပါပဲ။ […]
ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာ တိုက်ခိုက်သူ ၃၀၀ နီးပါးကို အစုလိုက် ပြစ်ဒဏ်ချ ၊ လေးဦးကို သေဒဏ်ပေး
မောင်တောခရိုင်ရှိ ကျီးကန်းပြင် နယ်ခြားစောင့်တပ်ဌာနချုပ်၊ ငါးခူရနယ်ခြား စောင့်ရဲကင်းစခန်းနှင့် ရသေ့တောင်မြို့နယ်ရှိ ကိုးတန်ကောက် နယ်ခြားစောင့်စခန်းများကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် တိုက်ခိုက်မှုတွင် ပါဝင်သူ ဘင်္ဂါလီ ၂၉၄ ဦးအနက် ၂၇၆ ဦးကို ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ် ချမှတ်ခဲ့ပြီး ၁၈ဦးကို မတ်လ ၅ ရက်က ခရိုင်တရားရုံး (ဘူးသီးတောင်ရုံးစိုက်) တရားသေ လွှတ်ပေးခဲ့ကြောင်း မောင်တောခရိုင် ဒုတိယ တရားသူကြီး ဦးညိုလွင်ဦး က ပြောကြားသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလက မောင်တောခရိုင်တွင် အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့် စုစုပေါင်း ဘင်္ဂါလီ ၅၀၈ ဦးကို တရားစွဲဆိုကာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်က လေးဦး သေဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပြီး […]
ဆေးလိပ်သောက်မယ့် ငွေကိုစုပြီး ၆ လအတွင်း iPhone 8 ဝယ်နိင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသား
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးကို ဓိခိုက်နိုင်တယ် ဆိုတာကို လူတိုင်းသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆေးလိပ်ကြိုက်သူကတော့ သောက်နေအုံးမှာပါ။ မလေးရှား အမျိုးသား တစ်ယောက်ဟာ ၁၀ နှစ်ကြာ ဆေးလိပ်ပုံမှန် သောက်ခဲ့ပြီး တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး အလိပ် ၃၀ လောက် သောက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူဟာ iPhone 8 လိုချင်တဲ့ အတွက်ကြောင့် သူအရမ်းကြိုက်တဲ့ ဆေးလိပ်ကို ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမ စဖြတ်ခြင်း ၃ ရက်မှာတော့ ညဘက်ဆို လုံးဝ အိပ်မရဘဲ ဆေးလိပ်သောက်ချင်တဲ့ စိတ် ပြင်းပြနေပြီး နှာခေါင်းမှာလည်း ချွေးဆီးတွေ ထွက်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူဟာ ဆေးလိပ်ဖိုးငွေတွေကို စုခဲ့ပြီး ၆ လကြာတော့ မလေးငွေ […]
နှစ်ရှည်လများကြာအောင် အရက်စွဲနေတဲ့ လူပေါင်း ၈၀၀၀ ကျော်ကို ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်ရှိ ယုန်ထောင်တောရကျောင်း ဆရာတော်အရှင်တေဇနိယျက အရက်ပြတ်အောင် ကုသပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဆရာတော်က မိန့်ပါတယ်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ကျွဲကန်ကျေးရွာ အလွန်တောထဲမှာ တပါးတည်း တောရတည်ဆောက်နေတဲ့ ဆရာတော်အရှင်တေဇနိယျက နှစ်ပေါင်းများစွာ အရက်စွဲနေသူတွေကို သစ္စာရေတိုက်ပြီး အရက်ဖြတ်ပေးနေတာပါ။ ဆရာတော်ဆီကို မြန်မာပြည်ဒေသအနှံ့အပြားက အရက်ဖြတ်လိုသူတွေ လာရောက်ကြပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ထားဝယ်နဲ့ ကော့သောင်းမြို့တွေကနေ လာရောက် အရက်ဖြတ်ကြသူတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဆရာတော်ဟာ အရက်သာမက မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲနေသူတွေနဲ့ ဘီယာ၊ ခေါင်ရည်စွဲသူတွေကို ပြတ်သွားအောင်လည်း ကူညီကုသပေးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အရက်လာဖြတ်သူတွေဆီက အမြဲတမ်းဆက်သွယ်ရမယ့် ဖုန်းနံပါတ်တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ အခြေအနေကိုလည်း ဆရာတော်က မပြတ်စစ်ဆေးပေးနေပြီး အဲဒီထဲကနေ […]
On March 13, 2018 October 3, 2018 By mmhtet
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စစ်ဘက်စွမ်းအားစာရင်း GFP မှာ မြန်မာက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှထက် များစွာသာလွန်နေတယ်လို့ Dhaka Tribune ဖော်ပြ သားဖိုးကောင်း ဘင်္ဂလားဒေရှ့်နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာစစ်အင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာ အဆင့် ၅၇ မှာသာရှိခဲ့ပေမယ့် အိမ်နီးချင်း မြန်မာနိုင်ငံက ကမ္ဘာစစ်အင်အားအဆင့်မှတ်ချက်မှာ အဆင့် ၃၁ မှာရှိခဲ့တယ်လို့ ကမ္ဘာစစ်လက်နက် အစီရင်ခံစာတစ်စောင့်ဖြစ်တဲ့ Global Fire Power Index 2017 မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေရှ့်နိုင်ငံထဲကိုမြန်မာနိုင်ငံက ဘင်္ဂါလီမွတ်စလင်တွေ ထွက်ပြေးမှုအပြင် ပိုင်နက် အငြင်းပွားမှုတွေကြောင့် မြန်မာ နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေရှ့်နိုင်ငံကြားဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ တင်းမာမှုတွေ ဆယ်စုနှစ်ချီရှိနေခဲ့ပါတယ်။ အိမ်နီးချင်းနှစ်နိုင်ငံကြား နယ်စပ်ဒေသတစ်လျှောက် တပ်ဖွဲ့တွေဖြန့်ကြက်မှုအပြင် အပြန်လှန်ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့် စိုးရိမ်ရတဲ့ ဆက်ဆံရေးမျိုးလည်း ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ နယ်စပ်ဒေသမှာ မြန်မာဘက်က […]